Wax ka ogoow sababaha keenay inay kordhaan qaraxyada iyo weerarada ka dhaca Muqdisho. – Soomaali 24 Media Network
Wax ka ogoow sababaha keenay inay kordhaan qaraxyada iyo weerarada ka dhaca Muqdisho.
Ilaa shan qodon ayaa loo aaneynaa inay sabab u yihiin kororka weerarrada Alshabaab ee sii kordhay iyo wax qabasho la’aanta ciidamada amniga, waxayna kala yihiin.
Previous Alshabaab oo soo bandhigay shaqsiyaad ay sheegeen inay la beedsadeen qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho.
Next sidee bay uga jawaabeen hey’adaha amnigu Su’aalihii ay weydiiyeen xildhibaanadu? (AQRISO)